Ukuqonda ukuBaluleka kweZikhokelo zoLuhlu lweeMpahla (IQG) | Martech Zone
Ukuthenga imithombo yeendaba kwi-Intanethi akufani nokuthenga umatrasi. Umthengi unokubona umatrasi kwenye ivenkile afuna ukuyithenga, engaqondi ukuba kwenye ivenkile, kwa into leyo lixabiso eliphantsi kuba iphantsi kwegama elahlukileyo. Le meko yenza ukuba kube nzima kakhulu kumthengi ukuba azi kakuhle ukuba bafumana ntoni; Kukwanjalo nakwintengiso ekwi-Intanethi, apho iiyunithi zithengwa zathengiswa zaphinda zafakwa kubathengisi abohlukeneyo, kudala indawo yentengiso enenkungu apho abathengi banokungafihli nto.
Umcimbi ubangelwa yinto yokuba kukho amawaka eenkampani kwindawo, uninzi lwazo lunolwimi olwahlukileyo, imithetho eyahlukeneyo, iimetric ezahlukeneyo kunye nendlela eyahlukileyo yokuqhuba ishishini labo. Oku kusilela kwendlela efanayo kukhokelele Izikhokelo zoLuhlu lweZikhokelo zeMigangatho (IQG), inkqubo eqinisekisayo yabathengisi bedijithali. I-IQG inika umgangatho osisiseko kwintengiselwano, ivumela abathengi ukuba benze izigqibo benolwazi ngokusekwe kumgangatho. Iqinisekisa isakhelo sokhuselo lwebrand kunye nokwenza izinto elubala kwabathengi.
Injongo yale nkqubo kukukhuthaza imeko yentembeko kwindawo yentengiso kunye nokunciphisa nakuphi na ukungqubana. Ezi zikhokelo zibonelela ngolwimi oluqhelekileyo oluchaza ngokucacileyo iimpawu zoluhlu lweentengiso kunye nokuthengiselana kwikhonkco lentengiso. Abathengisi banokusebenzisa esi sikhokelo siqhelekileyo sokubhengezwa kulo lonke ishishini ukuqinisekisa ukuthotyelwa komgangatho omkhulu kunye nokwenza lula ukusonjululwa kweempikiswano nezikhalazo.
Abathengisi banethuba lokoyisa ukuqhekeka ngokuthatha inxaxheba kwinkqubo ye-IQG kunye nokufumana ukuqinisekiswa komntu wesithathu kulawulo kunye neenkqubo zabo ezinxulumene noko. Le mithetho isisiseko iqinisekisa ukuba abathengi bakuqonda ngokupheleleyo oko bakuthengayo, kwaye abathengisi baveza ulwazi olufanelekileyo ukulungiselela oku; indlela efanelekileyo yokuqhuba ishishini.
I-IQG iphucula ishishini liphela ngokukhusela bobabini abathengisi kunye nabapapashi. Ezi zikhokelo ziqinisekisa umxholo kunye nezikhokelo zoyilo ezikhusela iimveliso kunye nabapapashi ekubeni banxulunyaniswe nomxholo ongakhuselekanga. Abathengisi banokuqinisekisa ukuba iintengiso zabo aziqhutywa kwindawo engamanyala, kwaye abapapashi banokuthintela iintengiso ezikumgangatho ophantsi ezingakulungelanga ukupapashwa kwazo kwindawo yazo.
Enye into ebalulekileyo ye-IQG kukuba inyanzela abathathi-nxaxheba ukuba baphumeze iinkqubo ezibhalwe kakuhle kulo mbutho wonke. Iqela eliphicothayo livavanya iinkqubo kwaye liqinisekisa ukuba inkampani iyaziphila ezi zikhokelo. Esi siqinisekiso sidala iitsheki kunye neebhalansi kwiinkampani zonke. Ngokwenza njalo, abaphicothi zincwadi bayalususa uluvo lolwazi lweziko ngokwenza iinkampani zibe luxwebhu kwaye zihambelane neenkqubo.
Okokugqibela, i-IQG ibeka ixabiso apho kufanele ukuba khona ixabiso. Ngokususa umaleko ongaziwayo apho umthombo wawo ungaziwa, abadlali bayakwazi ukuqhuba ishishini ngokutyibilikayo. Oku kuvumela bobabini abathengisi kunye nabapapashi ukuba bathethe ngokukhululekileyo nangokusekuhleni malunga nezinto ezihamba nazo. Iiyunithi zentengiso ezikumgangatho ophezulu xa zidlala, abathengisi banokuqhuba amaphulo aphumelele ngakumbi. Kwangelo xesha, olu luhlu lunikeza abapapashi ithuba lokufumana ii-CPMs eziphezulu ngokubiza ixabiso elifanelekileyo kwezi yunithi zivavanyiweyo.
Intengiso ekwi-Intanethi lishishini elisakhulayo nelitshintshayo, kwaye njengoko ishishini likhula, abadlali banethuba lokumila kunye nokomeleza ulwalathiso lwayo. I-IQG iphakamisa amanqanaba omgangatho wempahla kwaye ibonelela ngeemveliso ngowona mgangatho uphezulu kunye nezisombululo zentengiso ezinqamlezileyo. Eli lelinye inyathelo kumanyathelo ethu okusombulula izinto ukuqinisekisa umgangatho kunye nexabiso kuye wonke umntu - iimveliso, iiarhente kunye nabapapashi.
Malunga nokuzibandakanya: BDR
Zibandakanye: I-BDR ikhokela intlawulo kwimigangatho kunye nokuqinisekiswa xa kufikwa ku-antifraud, malware kunye nomgangatho wempahla. Zibandakanye: I-BDR yaba yenye yeenkampani zokuqala ukuphicothwa ngokuzimeleyo kwimigangatho ye-QAG kwaye bakwinkqubo yokufumana Isiqinisekiso se-IQG. Zibandakanye: I-BDR iyaqhubeka nokusebenza ngokuqhubekayo kunye nabapapashi ukulwa izinto ezichaphazela kakubi umgangatho wempahla.
tags: Uluhlu lweentengisointengisoubuqhetseba bentengisoUluhlu lweentengisoumgangatho wentengisoantifraudumgangatho wempahlaIzikhokelo zoLuhlu lweMigangathoiqgisoftwentengiso kwi intanethiabavakalisitagIzikhokelo zoLuhlu lweZikhokelo zeMigangathoUkuqinisekiswa kweqela lesithathu